Sheekh Soomow oo ku baaqay in maxkamad la soo taago Taliyaha Booliska Somaliya +(SABABTA) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Sheekh Soomow oo ku baaqay in maxkamad la soo taago Taliyaha Booliska...
Sheekh Soomow oo ku baaqay in maxkamad la soo taago Taliyaha Booliska Somaliya +(SABABTA)
Sheekh Cabduqaadir Soomow
Muqdisho (Halqaran.com) – Sheekh Cabduqaadir Sheekh Maxamuud Abuukar (Soomow) oo ka mid ah culima’udiinka taageersan Dowladda Somaliya ayaa waxaa uu dowladda ugu baaqay inay maxkamad horkeento, Taliyaha Ciidamada Booliska Somaliya, General Cabdi Xasan Maxamed (Xijaas).
Sheekh Cabduqaadir Sheekh Maxamuud Abuukar ayaa ka carooday laba bar kontorool oo ku yaala Magaalada Muqdisho oo sida uu sheegay laga celiyay. Barraha laga celiyay ayuu sheegay inay ku kala yaallaan Isgoysyada Sanca & Jardiinka.
Tani ayuu sheegay inay timid markii ay Ciidamada Booliska u sheegeen inaanu shaqaynayn ID, ay kol hore dowladda aqoonsi ahaan u siisay.
Sheekh Cabduqaadir Soomow ayaa ku waramaya in uu khadka teleefanka kula xiriiray Taliyaha Booliska Somaliya, si uu cabashadiisa ugu gudbiyo, balse markii uu teleefanka ka jawaabi waayay uu u diray farriin qoraaleed. Waxa uu intaa ku daray farriintaasi ka dib in Taliyaha uu teleefanka ka jawaabay, ha yeeshee uu murun dhex maray.
isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in ujeedada uu Taliyaha ula xiriiray ay ahayd in Ciidamada Booliska uu u sheego inaanan kontorooladaasi lagu celin gaarigiisa.
Sheekh Cabduqaadir Soomow oo hadalkiisa caro laga dhadhansan karay ayaa sheegay in nin ceynkaasi ah aanu xil dowladeed qaban karin, waxaana uu Madaxda Qaranka ugu baaqay inay xilka ka xayuubiyan, isla-markaana ay maxkamad soo taagaan.
Sheekh Soomow oo siyaabo kala duwan ula hadlay Warbaahinta gudaha, muuqaal video ahna soo dhigay bartiisa Facebook ayaa sheegay inaanan la aqbali karin in culimada lagu celiyo barraha ay ciidamada kaga sugan yihiin Wadooyinka Magaalada Muqdisho.
Sheekh Cabduqaadir Sheekh Maxamuud Abuukar Soomow